पीपीई र फेससिल्ड लगाएर कैंची चलाउँदै सैलुन व्यवसायी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
बिन्देश्वर भन्छन् : सैलुन नै मेरो खेतीबारी हो
असार ३१, २०७७ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — हिजोआज कपाल काट्न कैंची समात्नासाथ जुरी ठाकुरको मनमा चिसो पस्छ । कतै उक्त ग्राहकमा कोरोना त छैन भन्ने शंकाले मनमा डेरा बसाउँछ । आफूले अपनाएको सावधानीतर्फ ध्यान पुगेपछि भने ढुक्क भएर कैंची चलाउन थाल्छन् । जुरीले पीपीई, अनुहारमा मास्क, हातमा सर्जिकल ग्लोभ्स लगाएर कपाल काट्न थालेका छन् ।
आइतबार 'जुरी युनिसेक्स पार्लर'मा पुग्दा उनी पीपीई लगाएर नै ग्राहकको कपाल काट्दै थिए । फेससिल्ड पनि लगाएका थिए । सावधानीका लागि यी सब कुरा पहिरँदा उनलाई काम गर्न असहज भने भएको रहेछ। ग्राहकको कपाल काटिदिँदै सुनाए, 'ग्लोभ्स लगाएर कपाल काट्न गाह्रो छ । मजबुरीमा काम गर्नु पर्‍यो । त्यहीमाथि पीपीई सुटले एकदम गर्मी हुने । अब नलगाउँ भने पनि नहुने ।'
जुरीको डेरा पार्लरनजिकै छ । उनी सबेरै घरबाटै पीपीई लगाएर हिँड्दै पार्लर आइपुग्छन् । उनका स्टाफहरुले पनि हातमा ग्लोभ्स शरीरमा पीपीई सुट लगाएर नै काम थालेका छन् । ग्राहकलाई ढोकैमा स्यानिटाइजर लगाउने व्यवस्था छ । स्यानिटाइजर लगाइदिन एक जना स्टाफ ढोकैमा उभिन्छन् । कैंची, काइँयोलाई डिटोलपानीमा सफा गरेर प्रयोग गर्छन् । यस्तै सुरक्षा व्यवस्था अपनाएर जुरीले असार १ गतेबाट पार्लर खोले । बानेश्वरको ठूलो खरिबोट नजिकै छ जुरीको पार्लर । लकडाउनले गर्दा तीन महिना उनको पार्लर बन्द भयो । सरकारले अझै पार्लरहरु खोल्ने अनुमति दिइसकेको छैन । खान पनि धौधौ भएपछि आफूले पार्लर खोलेको जुरी बताउँछन् ।
'सरकारले अहिले अनुमति दिएको छैन । त्यसैले मास्क,पीपीई लगाएर काम गरिरहेका छौं । यो पीपीई सुट नाईं संघले दियो,' उनले सुनाए, 'खानाका लागि पैसा पनि भएन । अलिअलि भएको पैसा पनि सकियो । त्यसैले बिस्तारै थोरै मान्छे राखेर काम थाल्यौं ।'
जुरीको पार्लर सानो छ । एउटा कोठा त्यहीमाथि चारवटा कुर्सी । चार जनाभन्दा बढी ग्राहक बढ्यो भने सामाजिक दूरी कायम गर्न हम्मेहम्मे पर्छ । तर, आफूले सक्दो सामाजिक दूरी कामय गरेको उनको दाबी छ । पार्लर खोलेपछि सुरुवातमा त एक-एक जना ग्राहक राख्दै काम थालेका थिए । तर, अहिले पार्लरमा ग्राहक बिस्तारै बढ्न थालेका छन् । तर, पहिलाको जस्तो बाक्लो भीड नहुने उनी बताउँछन् । 'पहिला त खाना खाने फुर्सद हुन्थेन । कस्टमरहरु धेरै आउनुहुन्थ्यो । अहिले त छैन, चिनेजानेको मान्छे आउनुहुन्छ,' उनले भने ।
तीन महिना पार्लर बन्द हुँदा जुरीले साथीभाइसँग ऋण गरेर दैनिकी चलाए । बचत गरेको केही रकमले लकडाउनको सुरुवाति महिना काटे । कोठा र पार्लरको भाडा सम्झेपछि लकडाउनमा उनको छटपटी बढ्यो । पार्लरको मासिक भाडा १० हजार । तीन महिनाको भाडाको चिन्ताले त्यसपछि उनलाई ढुक्कले घरमा बस्न दिएन ।
'तीन महिना घरमै बसियो । अभाव त भइहाल्यो । हामीजस्तो सानो मान्छेलाई त गाह्रो भइहाल्छ । साथीभाइसँग सापटी लिएर काम चलायौं,' जुरी सुनाउँछन्, 'पार्लरको भाडा कसरी तिर्ने ? पार्लर पनि खुल्न दिएको भए हुन्थ्यो । सबैथोक त खुलिसक्यो । हामी खुलेन भने कहाँबाट ल्याउनु भाडा तिर्नु, खानु । काठमाडौंमा त्यतिकै महँगो छ ।'
पार्लर खोलेसँगै सप्तरीमा रहेका परिवार उनलाई लिएर चिन्तित छन् । जुरीलाई बारम्बार फोन गरेर सुरक्षित हुन भनिरहन्छन् ।
अहिले पार्लरको सटर खोलेसँगै जुरीलाई आफूले लिएको ऋण चुक्ता गरिदिन पाउने, परिवारलाई खर्च पठाउने कुराले आशावादी बनाएको छ । पार्लरमा ग्राहक आउन थालेपछि उनको चिन्ता कम हुँदै गएको छ । 'अब त बिस्तारै काम गर्दै गएपछि समस्या समाधान हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ, ' मुसुक्क हाँस्दै सुनाए ।
कोरोनादेखि डर लाग्दैन ? हामीले सोध्यौं ।उनले जवाफमा भने, 'डर त लागिहाल्छ । आफ्नो ज्यानभन्दा प्यारो के छ र । तर खानलाई पैसा छैन । त्यसैले पार्लर खोल्न बाध्य भयौं ।'
जुरीले जीवनमा कपालमा कैंची चलाउने बाहेक अन्य कुनै पेसा अँगालेनन् । बुवाबाट सिकेको यो पेसा उनको लागि प्यारो बन्यो । उनी यसमै रमाउन थाले । जुरीले कैंची चलाउन थालेको १९ वर्ष भयो । खरिबोटमा पसल खोलेकै १९ वर्ष भएको उनको दाबी छ । यसरी लकडाउन बढ्दै जाने हो भने आफूलाई घाटा हुने उनी बताउँछन् । उनले भने, 'लकडाउन लम्बिँदै जाने हो भने हामीलाई धेरै घाटा हुन्छ । कामै नभएपछि पैसा कहाँबाट ल्याउने । काम भए पो घरभाडा तिर्ने, घरमा पठाउने हुन्छ त ।'
अब सरकारले सुरक्षा व्यवस्था अपनाएर सैलुन, पार्लरहरु खोल्न अनुमति दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । 'यस्तै पीपीई, मास्क लगाएर पार्लर खोल्न दिनुपर्छ सरकारले,' उनले भने, 'सरकारले राहत दिनुपर्‍यो । पसलको भाडा छुट गराइदिनुपर्‍यो ।'
पार्लर खोलेसँगै जुरीका घरबटी उनलाई सतर्क भएर काम गर्न सल्लाह दिन्छन् । जुरी कलाकारका कपाल पनि काटिदिन्छन् । लकडाउनअघि पार्लर बढाउने सोच बनाएका जुरीको सपना कोरोनाले गर्दा पूरा भएन । तर, पार्लर नबढाए पनि अहिले उनले स्टाफसंख्या बढाएका छन् । अवस्था सामन्य हुँदै पक्कै जुरीको सपना पूरा होला ।
२० वर्षदेखि नाई पेसा थालेका ३८ वर्षीय बिन्देश्वर ठाकुरले जीवनमा कहिल्यै यस्तो महामारीको सामना गरेनन् । तर कोरोना महामारीले गर्दा जीवनमा पहिलो पटक उनले तीन महिनासम्म ललितपुरको बागडोलमा रहेको 'नेपाल सैलुन' बन्द गरे । भोकले मर्ने स्थिति आएपछि आफूले पार्लर खोलेको उनी बताउँछन् ।
'जटिल छ हजुर । रोग भन्दा भोगले मर्ने स्थिति आयो । त्यही भएर ज्यान थापेर पनि काम गर्नुपर्योल भनेर काम सुरु गरें,' उनले भने,'यो पसल नै मेरो खेतीबारी हो । पाँ चजनाको ज्यान यसैले पाल्नुपर्छ । अहिले पसलमा स्यानिटाइजर राखेको छु । पीपीई सुट लगाउँछु ।'
२ हप्ता भयो बिन्देश्वरले सैलुन खोलेको । सुरुवातको दिनमा ग्राहक ह्वात्तै बढे पनि अहिले फेरि घटेको छ । काठमाडौंमा संक्रमण बढेसँगै ग्राहकमा डर देखिएको उनको अनुभव छ । 'अहिले ग्राहक पनि धेरै आउनुहुन्न । काठमाडौंमा कोरोना बढेर उहाँहरु डराउनु भएको छ,' उनले सुनाए । ग्राहकजस्तै आफूलाई पनि काठमाडौंमा संक्रमण बढेको समाचार बढ्दा डर लाग्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
तीन महिनाको सैलुनको भाडा ४५ हजार तिर्नुपर्छ उनले । घरभाडा पनि दिन सकेका छैनन् । सैलुन चले भाडा तिर्न सहज हुन्थ्यो । सुरक्षा अपनाएर खोलेको सैलुन खाली देख्दा परिवारको चिन्ताले थप पिरोलेको उनले सुनाए । उनले पनि 'नेपाल नाई ट्रेड युनियन'बाट पीपीई सुट ल्याएर काम थालेका हुन् । आफूले सरकारबाट राहतको आश गरेको उनले बताए । 'सरकारले घरभाडामा छुट दिन्छ भनेर राहतको आश छ,' बिन्देश्वरले भने ।
अर्का नाई व्यवसायी भैरव ठाकुरले ललितपुरको बागडोलमा सैलुन खोलेको २२ वर्ष भयो । आफ्ना दुई छोराछोरीलाई उनले यही पेसा गरेर हुर्काए, पढाए । लकडाउन अवधिमा अन्य व्यवसाय खोलेको देख्दा उनले पनि सैलुन खुल्ला राखेका थिए । तर, प्रहरीले खोल्न दिएन । तीन महिना उनको सैलुनमा ताल्चा लाग्यो । जसोतसो छोराछोरीलाई लकडाउन अवधिभर खुवाए । तर, अहिले गोजी नै रित्तो भएपछि आफूले सैलुन खोलेको उनी बताउँछन् । 'गाह्रो भो । तीन महिना पसल बन्द गरेर,' ४२ वर्षीय भैरवले सुनाए, 'अहिले एकदम सरसफाइमा ध्यान दिएको छु । राती सैलुनमा स्यानिटाइजर छर्कन्छु । अनि कस्टमरलाई पनि स्यानिटाइजर लगाउँछु ।'
मंगलबार नाई व्यवसायीले आन्दोलन नै गरे । कैंची, काइँयो बोकेर उनीहरु सडकमा उत्रिए । उनीहरुको एउटै माग थियो, नाई व्यवसायीलाई लकडाउन अवधिभर प्रतिमहिना २५ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
लकडाउनले गर्दा नाई व्यवसायी मारमा परेको भन्दै आफूहरुले सरकारमा राहतको माग गर्दै आएको ट्रेड युनियन गजेन्द्र ठाकुरले बताए । उनी सैलुन र पार्लर चाँडै खोल्न दिनुपर्ने बताउँछन् । 'श्रमिकहरु मर्कामा छ । सरकारले
लकडाउन अवधिको बैंक ब्याज, पसल तथा कोठा भाडा मिनाहा गरिदिनु पर्यो् । सैलुन र पार्लर खोल्न क्याबिनेटमा निर्णय गरिदिनुपर्योर ।' उनले नाई व्यवसायीलाई नि:शुल्क पीपीई सेट उपलब्ध गराउनुका साथै ५० लाख बराबरको जीवन बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। प्रकाशित : असार ३१, २०७७ १४:१६
काठमाडौँ — अभिनेता राजेश हमालले अभिनेत्री दीपाश्री निरौलालाई 'क्षमा' गरिदिन आफ्ना प्रशंसकसँग आग्रह गरेका छन् । मंगलबार राति भिडियो सन्देश जारी गर्दै दर्शकलाई राजेशले दीपाश्रीलाई क्षमा गरिदिन अनुरोध गरेका हुन् ।
'यो कला क्षेत्र जहाँ हामी विभिन्न कलाकार संलग्न छौं यो क्षेत्र मेरो र अन्य कलाकारहरुको मात्र होइन । यो राष्ट्रको कला क्षेत्र तपाईंहरुको पनि हो । भलै मैदानमा हामी उत्रन्छौं, मैदानमा हामी मिहिनेत गर्छौं । तर त्यसको पछाडि ऊर्जा त हामीलाई तपाईंहरुबाटै मिल्छ,' उनले भनेका छन्, 'त्यसकारण तपाईंहरुको भूमिकामा सदैव हाम्रो सिर्जनामा हाम्रो कलामा अत्यन्तै ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यसैले पनि म यहाँहरुलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो राष्ट्रको कला क्षेत्रका र मानवताका लागि अत्यन्तै सकारात्मक भएर कृपया सम्बन्धित व्यक्तिलाई क्षमा दिनुहोला ।'
भिडियोमा दीपाको नाम नलिई उनले सम्बन्धित व्यक्तिका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न आग्रह गरेका छन् । 'अलिक फराकिलो भएर बृहत् चित्रलाई मनन गरेर अत्यन्त सकारात्मक हिसाबबाट मानवताका लागि र कसैको मानवतामा आँच नपुग्ने गरी आफ्ना अभिव्यक्तिहरु प्रकट गरौं,' उनले भनेका छन्,'कलाकारलाई आफ्नो सिर्जना पस्कने प्रेरित गरिरहनु होला । यहाँहरुबाट सकारात्मक प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्दछु । कलाकारहरुलाई यहाँहरुले अगाडि बढ्नका लागि एउटा सहज वातावरण सिर्जना गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशामा छु ।'
दीपाको अभिव्यक्तिमा दर्शकले आक्रोश पोखिरहेको कुरा पनि उनले भिडियोमा बताएका छन् । 'हालै यहाँहरु सबैलाई थाहा नै होला कि मेरा सहकर्मी, मजस्तै कलाकारले एउटा सार्वजनिक मञ्चमा मलाई लक्षित गरेर उहाँका केही भनाईहरु राख्नुभयो । र त्यो भनाई र कुराहरुलाई सुनिसकेपछि दर्शक/जनसमुदायहरुले असन्तुष्टि मात्र होइन एक किसिमले आक्रोश पोख्नुभयो । र पोखिराख्नु भएको छ । यो सिलसिला चलेको २/३ हप्ता भयो,' उनले भने ।
दीपाश्रीले पछिल्लो समय कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा सामाजिक सञ्जानलमा आएका नकारात्मक प्रतिक्रियाले आफू तनावमा रहेको बताएकी थिइन् ।
राजेश आफैले भिडियोमा दर्शकलाई प्रश्न गर्छन् । 'हामीले अलिकति फराकिलो भएर हेर्यौं भने कि एउटा व्यक्तिले पेशागत हिसाबले होस् या आफ्नो कुनै विशेष इच्छाले सार्वजनिक स्थलमा राख्नुहुन्छ भने एक्कासि यस्ता किसिमको प्रतिक्रियाहरु दिने जसले गर्दा त्यो व्यक्तिको मानवतामा आघात पुगोस्, चोट लागोस् के त्यस्तो कार्य गर्नु सही होला र ?'
अभिनेता हमालले भने जस्तोसुकै प्रतिक्रिया आए पनि आफूमा सहन सक्ने सहिष्णुता रहेको बताउँछन् । 'मलाई व्यक्तिगत हिसाबबाट सोध्नुहुन्छ भने ममा त्यो सहिष्णुता छ । यस्ता किसिमको भनाईहरुलाई अभिव्यक्तिहरुलाई नजरअन्दाज गरेर आफ्नो कार्यमा अघि बढिरहने । त्यो सहिष्णुता यहाँ दर्शकहरुले दिनु भएको ऊर्जाबाटै प्राप्त भएको हो । त्यसैले यसमा तपाईंहरुको अत्यन्त नै ठूलो भूमिका छ,' उनले भने ।
प्रकाशित : असार ३१, २०७७ १३:३४